‘शेरबहादुरजी र ओलीजीबीच निकटता छ’- कुराकानी - कान्तिपुर समाचार
‘संविधानलाई ट्य्राकमा ल्याउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनैपर्छ । ओलीले आफू हार्ने चुनाव किन गराउँछन्  ?’
काठमाडौँ — प्रतिनिधिसभा विघटनपछि नेकपा दुई समूहमा स्पष्ट विभाजित भइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस पनि तरंगित भएको छ । सभापति शेरबहादुर देउवा विघटनविरूद्धको आन्दोलनलाई चुनाव तयारीको साधनका रुपमा प्रयोग गर्न चाहिरहेका छन् ।
संस्थापनइतर समूह भने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामा जोड दिइरहेको छ । यसै सन्दर्भमा कान्तिपुरका कुलचन्द्र न्यौपानेले कांग्रेस महामन्त्री शशांक कोइरालासँग गरेको कुराकानी :
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना कि निर्वाचन भन्नेमा मतान्तर देखिरहेका बेला तपाईंको सार्वजनिक अभिव्यक्ति पनि प्रस्ट छैन नि । तपाईंको धारणाचाहिँ के हो ?
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले असंवैधानिक बाटोबाट प्रतिनिधिसभा विघटन गरिदिएपछि संविधान अहिले ‘आउट अफ ट्र्याक’ छ । पहिला संविधानलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउनुपर्छ । त्यो भनेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना नै हो । मेरो भनाइ पनि संविधानको रक्षाका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनामै पार्टी जानुपर्छ भन्ने हो ।
सभापति शेरबहादुर देउवासँग तपाईंले यसबीचमा दुईपटक भेट्नुभयो । उहाँसँग भेट्नुअघि एउटा, भेटेपछि अर्कै धारणा आउने गरेको पनि भनिन्छ नि ?
त्यस्तो होइन । पछिल्लोपटक शेरबहादुरजीले पार्टीको अधिवेशन र प्रदेश सरकारविरुद्ध आएका अविश्वास प्रस्तावका विषयमा छलफल गर्न बोलाउनुभएको थियो । अहिले प्रदेश १ र वाग्मतीमा मुख्यमन्त्रीविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव दर्ता भएको छ । यस विषयमा कसलाई सहयोग गर्ने भन्नेबारेमा छलफल भएको थियो ।
नेकपाको कुन पक्षसँग गठबन्धन गर्ने कुरा भइरहेको छ त ?
अहिले छलफलमै छौं । मेरो धारणा प्रदेश १ मा नेकपाको पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल पक्षलाई दिऊँ, वाग्मतीमा हामीले मुख्यमन्त्री लिनुपर्छ भन्ने छ । सभापतिजीलाई पनि यही कुरा भनेको छु । उहाँले अरू साथीहरूसँग पनि छलफल गर्छु भन्नुभएको छ ।
प्रदेश सरकार निर्माणमा कांग्रेसको गठबन्धन दाहाल–नेपाल समूहसँग हुन लागेको हो ?
तल्लो तहमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीको समूहकै वर्चस्व छ । हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा पनि ओली समूहसँगै हुने देखिन्छ । त्यसैले दाहाल–नेपाल समूहसँग मिलेर जाँदा राम्रो हुन्छ भन्ने मेरो धारणा हो । सभापतिजीले यस विषयमा अरू साथीसँग पनि छलफल गरेर निर्णय गरौंला भन्नुभएको छ ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले ओली समूहसँगै गठबन्धन गर्नुपर्छ भन्नेमा जोड दिनुभएको चर्चा साँचो हो ?
त्यस्तै देखिन्छ । शेरबहादुरजीले सिफारिस गरेका व्यक्तिलाई ओलीजीले संवैधानिक आयोगमा ल्याइदिनुभयो । शेरबहादुरजी र ओलीजीमा पहिलादेखि नै सफ्टनेस देखिन्छ । उहाँकी सासू (प्रतिभा राणा) लाई राजदूतबाट अहिलेसम्म हटाइएको छैन । जबकि सँगै राजदूत भएका डा. चोपलाल भुसाललाई हटाइदिए । यसले पनि उहाँहरूबीचको निकटता छ भन्ने देखाउँछ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको उपस्थितिबिना अध्यादेश जारी गरेर बसेको संवैधानिक परिषद्को बैठकले गरेका सिफारिसलाई कांग्रेसले स्वीकार गरेको हो ?
शेरबहादुरजीले भनेका मान्छे सिफारिसमा परेकाले पनि पार्टी नेतृत्व यसमा चुप बसेको छ ।
तपाईंहरू पनि बोल्नुभएको छैन नि ?
सभापतिजीले बोल्नुहुन्न । हामीले के बोल्ने ?
यो त प्रणालीलाई भत्काउने काम भएन र ?
उहाँले केही बोल्नुभएको छैन । व्यक्तिगत रूपमा उहाँका मान्छे परेको भएर पनि नबोल्नुभएको होला । यसले प्रणालीलाई कमजोर बनाउँछ । अब हामी बोल्नुपर्छ ।
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको पक्षमा बोल्दै नबोल्नुहोस् भनेर सभापतिजीले तपाईंलाई फकाउनुभएको चर्चा छ नि ?
शेरबहादुरजीको धारणा निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने नै थियो । मैले निर्वाचनभन्दा महत्त्वपूर्ण त संविधान बचाउने हो नि भनें । संविधानलाई बचाउन प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनुपर्छ भन्ने ‘आर्गुमेन्ट’ मैले राखें । उहाँले हुन्छ अरूसँग पनि छलफल गरौंला भन्नुभयो ।
सार्वजनिक रूपमा निर्वाचनको विरोधमा नजानु पनि भन्नुभएको हो ?
अँ, त्यसरी नै भन्नुभयो । मैले निर्वाचनको विरोध कहाँ गरेको छु र ? पहिला संविधानलाई ‘ट्र्याक’ मा ल्याउन पुनःस्थापना हुनुपर्छ, त्यसपछि निर्वाचनमा जानैपर्छ भनेको हो । वैशाखमा निर्वाचन नहुने अवस्थामा पार्टीको महाधिवेशन प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ भनेको छु ।
पछिल्लोपटक तपाईं र सभापतिजीबीच सहकार्यको विषय पनि चर्चामा छ नि ?
उहाँले सहकार्यको केही पनि प्रस्ताव मसँग राख्नुभएको छैन । उहाँ आफैं सभापति लड्न तयारी गरिरहनुभएको पाएको छु । म पनि सभापतिको तयारीमै छु । सहयोग गर्ने कुरा उहाँले पहिला नै गर्नुभएको थियो । अहिले खास केही त्यस्तो कुरा भएको छैन ।
केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक लम्बिँदै जानुको कारणचाहिँ के हो ?
बैठकमा एजेन्डा के बनाउने भन्नेबारेमा छलफल भइरहेको छ । महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने विषयमा कतिपय विवाद छन् । तिनलाई मिलाउन छलफल भइरहेको छ । बैठक बोलाएर खालि भाषण गर्ने कुरा मात्रै भएन । केही ठोस निर्णय पनि गर्नुपर्‍यो । त्यसका लागि आन्तरिक छलफल गरेर बैठक बस्ने भनिएको छ । फेरि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलजी विराटनगर जाने कुरा गर्नुभएको छ । उहाँ फर्केपछि बैठक बस्नुपर्ने भएकाले पनि हो ।
केन्द्रीय कार्यसमितिले प्रतिनिधिसभा विघटनको विषयमा थप केही निर्णय लिन्छ ?
लिनुपर्छ । प्रतिनिधिसभा विघटन असंवैधानिक, अलोकतान्त्रिक भनेर हामी विरोध प्रदर्शनमै गइसकेका छौं । कांग्रेसको धारणा के हो भन्नेमा अब कसैमा अन्योल नहुनुपर्ने हो । कोर्टलाई पनि ।
निर्वाचनको पक्षमा पार्टी सभापति निरन्तर लागिरहनुभएको छ । तपाईंले आगामी वैशाखमै निर्वाचन हुने सम्भावना कत्तिको देख्नुभएको छ ?
वैशाखमै चुनाव हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । ओलीले आफू हार्ने चुनाव किन गराउँछन् ? वैशाखमा चुनाव हुन नसक्ने अर्को कारण नेकपा औपचारिक रूपमा फुट्नका लागि पनि समय लाग्ने देखिन्छ ।
निर्वाचन आयोगले अहिलेसम्म चुनाव चिह्नको विषयमा निर्णय दिएको छैन । जुन बेला आयोगले निर्णय दिन्छ, नपाउने पक्ष फेरि अदालत जाने सम्भावना छ । अदालतमा गयो भने अर्को दुई महिना निर्णय गर्न लाग्छ । अनि कसरी वैशाखमा निर्वाचन हुन्छ । त्यसैले मैले पार्टीको महाधिवेशनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ भनेर भन्दै आएको छु ।
तपाईंसँगको भेटमा सभापतिजी निर्वाचन हुनेमा कतिको ढुक्क देखिनुहुन्थ्यो ?
शेरबहादुरजीले बारम्बार चुनाव हुन्छ भन्नुहुन्छ । उहाँलाई विश्वास छ तर मलाई विश्वास छैन । २०६४ मा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टी हार्छ भन्ने जान्दाजान्दै पनि चुनाव गराउनुभएको थियो । ओलीमा त्यस्तो खालको सोचाइ देखिन्न ।
कांग्रेसले जिल्ला, संघीय, प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र हुँदै पालिका र वडास्तरमा विरोधका कार्यक्रम लगेको छ । यो कार्यक्रमको स्वरूप हेर्दा त निर्वाचनको तयारीमा अघि बढेको जस्तै देखियो नि ?
एक किसिमले त्यो तयारी त हो । अहिले नभए पनि निकट समयमा निर्वाचन त हुन्छ नै । जनतामा जानका लागि पार्टीहरूलाई एक किसिमको दबाब पनि हो ।
प्रकाशित : माघ ८, २०७७ १०:०७
राष्ट्रपति भण्डारी, उपराष्ट्रपति पुन र प्रधानमन्त्री ओलीले दिए बाइडेनलाई बधाई
माघ ८, २०७७ इकान्तिपुर डेस्क
काठमाडौँ — राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यभार सम्हालेकोमा जो बाइडेनलाई बधाई सन्देश पठाएकी छिन् । परराष्ट्रमन्त्रालयका अनुसार राष्ट्रपति भण्डारीले बाइडेनको सफल कार्यकालको कामना गर्दै बधाई सन्देश पठाएकी हुन् ।
सन्देशमा राष्ट्रपति भण्डारीले बाइडेनको कार्यकालमा नेपाल–अमेरिका सम्बन्ध अझ मजबुत हुने विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् । साथै अमेरिकाको नयाँ नेतृत्वले विश्वव्यापी महामारीको रुप लिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणको नियन्त्रणमा प्रभावकारी कदम चाल्नेमा पनि राष्ट्रपति भण्डारीले विश्वास व्यक्त गरेकी छिन् ।
त्यस्तै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई बधाई सन्देश पठाएका छन् । उपराष्ट्रपति पुनले अमेरिकाको पहिलो महिला राष्ट्रपति बन्दै इतिहास रचेकोमा पनि ह्यारिसको प्रशंसा गरेका छन् । साथै नयाँ नेतृत्वले लैंगिक समानता, सामाजिक न्याय र जलवायु परिवर्तनका मुद्दालाई प्राथमिकतामा राखेकोमा उपराष्ट्रपति पुनले प्रशंसा गरेका छन् ।
त्यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि अमेरिकी राष्ट्रपतिको पदभार सम्हालेकोमा जो बाइडेनलाई बधाई ज्ञापन गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओलीले बाइडेनको नेतृत्वमा अमेरिकाले थप समृद्धि र प्रगति गर्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् । साथै नेपाल–अमेरिकाबीच लामो समयदेखिको मित्रता अझ मजबुत हुने पनि उनले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै नयाँ नेतृत्वसँग मिलेर विविध विषयमा सहकार्य गर्न नेपाल आतुर रहेको पनि प्रधानमन्त्री ओलीले सन्देशमा उल्लेख गरेको परराष्ट्रमन्त्रालयले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले बाइडेनको कार्यकालमा द्विपक्षीय सम्बन्धका साथै आर्थिक साझेदारी र नागरिक–नागरिकबीचको सम्बन्ध आगामी दिनमा अझ मजबुत हुने पनि विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
त्यस्तै राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाले पनि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उपराष्ट्रपति कमला ह्यारिसलाई बधाई दिँदै आगामी दिनमा दुई देशबीचको सम्बन्ध नयाँ उचाइमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
अमेरिकामा फेरियो सत्ता
प्रकाशित : माघ ८, २०७७ ०९:४१